नेपाल हाइड्रो कम्पनीसहित चार कम्पनीको शेयरमूल्य ९ प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि, चन्द्रागिरिको शेयरमूल्य आठ सय नाघ्यो ? - नेपालबहस
नेपाल हाइड्रो कम्पनीसहित चार कम्पनीको शेयरमूल्य ९ प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि, चन्द्रागिरिको शेयरमूल्य आठ सय नाघ्यो ?
| ११:४०:३५ मा प्रकाशित
२६ फागुन, काठमाडौं । आज बुधबार पनि बढोत्तरीको यात्रामा निरन्तर अधि बढिरहेको चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको शेयरमूल्य मंगलवार ९ दशमलव ९९ प्रतिशत बढेको छ । आज कम्पनीको प्रतिशेयरमूल्य आठ सय नाघेको छ ।
यो समाचार तयार पार्दाको समय ११ः३० बजेसम्ममा कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता ७३ रुपैयाँले बढेर ८०४ पुगेको हो ।
त्यस्तै आइतवार १५ दशमलव ७९ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको नेपाल हाइड्रो डेभलोपर्स लिमिटेडको शेयरमूल्य मंगलवार पनि ९ दशमलव ८३ प्रतिशत बढेको छ । मंगलबार पनि कम्पनीको शेयर ९ प्रतिशत भन्दा बढिले वृद्धि भएको थियो ।
त्यस्तै बुधबार लिवर्टी इनर्जी कम्पनीको शेयर ९ दशमलब ८३ प्रतिशतले बढेर प्रतिशेयरमूल्य ३२४ स्पैयाँ प्गेको छ ।
आज कम्पनीको प्रतिशेयर ३५ रुपैयाँले शेयरमूल्य बढेर ३९१ रपैयाँ पगेको छ । त्यस्तै, यूनाइटेड फाइनान्स कम्पनीको शेयर ९ दशमलब ७४ प्रतिशतले बढेको छ ।
कम्पनीको आज प्रतिशेयर ३४ रुपैयाँले शेयरमूल्य बढेर ३८३ पुगेको हो । यसदिन चार बटै कम्पनीको शेयर खरीद चाप उच्च रहेको छ ।
भुकम्पपछि खोटाङका १ सय ६ अपाङ्गमैत्री र महिलामैत्री विद्यालयमा भवन निर्माण ६ दिन पहिले
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा रावल नियुक्त १ हप्ता पहिले
ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठक सुरु ३ हप्ता पहिले
गाउँपालिकाका सबै वडामा सडक सञ्जाल विस्तार ४ हप्ता पहिले
नेप्सेमा विजय लघुवित्तको ४ लाख २५ हजार कित्ता बोनस शेयर सूचीकृत २ हप्ता पहिले
हामीलाई विद्युत खपत बढाउनुपर्नेछ, कटौती गर्ने भन्ने प्रश्न नै छैन : कार्यकारी निर्देशक शाक्य ३ महिना पहिले